Zotra makany Mahitsy :: Raikitra ny fitakiana famindrana ny fiantsonana etsy Antohomadinika • AoRaha
Zotra makany Mahitsy Raikitra ny fitakiana famindrana ny fiantsonana etsy Antohomadinika
Efa ho roapolo taona mahery ny tobim-piantsonana eo Antohomadinika amin’ny zotra mihazo an’i Mahitsy. Ankehitriny, mitaky ny hamindrana an’io toeram-piantsonan’ny taksiborosy io ny mponina sy ny fokontany noho ny olana maro.
“Efa mitombo ny mponina eto amin’ny fokontany ka mihatery ny tanàna. Mibahana ireto fiara ireto, indrindra rehefa fotoam-pahavaratra satria izy ireo indray no mipetraka amin’ ny toerana maina fa ny olona kosa mifamezivezy anaty lavaka sy ranom-potaka. Efa betsaka ny fitarainana sy taratasy nalefa tamin’ireo tompon’ andraikitra ho fanatsarana ny tanàna saingy tsy misy mamaly hatramin’izao”, hoy ny fanazavan-dRandrianary Jean, lehiben’ny fokontany Antohomadinika Antsalovana.
Misy kaoperativa telo no miasa eo amin’ity toerana ity, dia ny Kofmad sy ny Kofiama ary ny Fifiabe. Teny Vassacos no fiantsonana tany am-boalohany. Nisy ny fifanarahana tamin’ireo mpitondra teo aloha amin’ny famindrana azy ireo tetsy Antohomadinika noho ireo mpivarotra atody izay avy any Mahitsy avokoa ny ankamaroany ka natao nifanakaiky ny tsena sy ny tobim-piantsonana.
Isan’ny itarain’ny mponina ihany koa anefa ny firongatry ny tsy fandriampahalemana sy tsy filaminana ao amin’ny fokontany vokatry ny fisian’io fiantsonana io.
Volley-Ball faritra faha-7 :: Tafita hanao manasa-dalana ny GNVB, JSA ary BI’AS
Fifamoivoizana :: Andrasana ny fanarenana ny fitaterana an-dalamby